နှင်းဟေမာ: “တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒီသီချင်းလေးတွေကို ညည်းတက်တယ်”
Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 11:34 PM
ဟိ .. ညည်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းကို ဘော်ဘော်တစ်ယောက်က တက်ခ်ထားလို့ ရေးပြီးပြီ ညီမလေး ....
tag တာ နောက်ကျတာကိုး .. ဟီး ..။
သနားလိုက်တာ နှင်းရယ် . . . ဟိဟိ
နှင်းရေ ရေပေးမယ်နော် အဲ ရေးပေးမယ်နော် သိလား ရှေ့မှာ လဲ ရှိသေးလို့နော် ဟီးးးး လူရှိန်အောင် ပြောတာကွ ဘာရမလဲ ခစ်ခစ်
စိတ်ညစ်နေတာနဲ့ သီချင်းတွေ အားလုံးကို စိတ်ထွက်ပေါက် အဖြစ်နဲ့ အော်ဆိုပစ်ခဲ့လိုက်တယ်...
နွယ်ရိုး ကြွက်စုတ် ...
နင့်ကိုလဲ ငါတဂ်တဲ့ စာရင်းထဲ မထည့်ထားဘူး
ဘာမှ လာမပြောနဲ့ ဟွင်း
ညီမလေးသီချင်းတွေက အစ်မ အမြဲလိုလိုနားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်လေးတွေ ။ =)
အုပ်စုတစ်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးကြီးမှာဆိုတော့ အသင်းခေါင်းဆောင်လား၊ ဂိုးစောင့်လားတော့ မသိဘူး။
အစ်မ ဆိုဖြစ်တဲ့ သီချင်းသိသွားရင် ငိုသွားလိမ့်မယ်...
အဖြူရောင်လေးကိုတော့ ကြိုက်တယ်... သီချင်းနော်...
သတိရရဲ့လားလို့ မေးချင်တယ်.... မင်းကမသိနိုင်ခဲ့...
သီချင်းတွေကို လာနားထောင်တာ. ဘဇာကြောင့် ကိုယ့်နာမည်ကိုပါ တဂ်ထားရတာတုန်း နှင်းရယ်။ ကိုယ်က သီချင်းဆို အားလုံးနီးပါး ဆိုလိုက်ညည်းလိုက် (ရေးရင် အရှည်ကြီးဖြစ်နေမှာ) ခံစားရတယ်လည်းမဟုတ်။ စိတ်ထွက်ပေါက်လည်းရအောင်။ နှင်းက ဆိုးတယ်ကွယ်။ ဒါပေမယ့်နော် စောင့်နော် ရေးပေးပါမယ်။ သိတယ်မဟုတ်လား ကိုယ်က အလုပ်ကများများရယ်။ (အဟဲ ကြွားထှာ)။ ကိုယ့်ကို ခင်မင်လို့တဂ်တာပဲ ရေးပေးရမှာပေါ့။ ကျေးဇူပါ နှင်း။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
အုပ်စုနှစ်စု ဘောလုံးကန်ရမှာလား ညီမလေးနှင်းရေ.း)
မနှင်းရေ.. ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ တဂ်ထားတာဆိုတော့ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
ကြွက်စုတ် အစုတ်ပလုပ် နင်နာ့ကို တက်ထားပီးတော့များ ခုမှ အရှက်ပြေ ပြန်ဖြုတ်လိုက်တာ မသိဝူးမှတ်နေလား၊ ဟဲဟဲ နင်လည်တာ ငါသွားကြားထိုးနေသလောက်ပဲရှိတယ် အဟတ် ဟတ်
သီချင်းအကြောင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်မှာ အချက်အလက်အနည်းဆုံးလို့ ပြော ရမယ် .... မနှင်းဟေမာ ရဲ့ တက်ဂ်ကို ကြိုးစားပြီးရေးပါ့မယ် ...
ချစ်သုဝေ သီချင်းတွေ အကုန်ကြိုက်တယ် ဟေမာရေ
ရှယ်တွေချည်းဘဲ ဘောလုံးအသင်းကလည်း 10 ယောက်ကြေးမလား အနော်က 11 ယောက်မြောက်ဆိုတော. ပိုနေသလားလို. ဒိုင်လုပ်ရင်
ကောင်းမလားလို. ဟီးးးးးးးးးးးးး စတာပါ ကိုဆောင်းကလည်း တဂ်ထားတော. နှစ်ထပ်ကွမ်း အကယ်ဒမီ :P
အမရေ.....သတိတရနဲ့ တဂ်ထားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းက ရွှေပြည်တော်ပြန်ခါနီးဆိုတော့ မအားတာနဲ့ ဘလော့ဘက်ကို မလှည့်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ အားတာနဲ့ တင်ပေးပါမယ်နော်။ နောက်ကျရင် စိတ်ဆိုးရဘူး။ အခုတော့ ကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ နားထောင်ဖြစ်တဲ့သီချင်းများကို စရံအနေနဲ့ ပေးခဲ့ပါကြောင်း။ http://www.ngachankaung.com/2008/08/english-songs-this-is-me-demi-lovato.html
စာတွေဖတ်ပြီး သီချင်းလေးတွေ လာနားထောင်သွားတယ်
နောက်ကျမှုအတွက် ဦးစွာပထမ တောင်းပန်ပါရစေ ညီမလေးရေ...
စနေ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်စလုံးမှာ လုံးဝမအားမလပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ခပ်စောစောရောက်မလာခဲ့မိတာပါ...
တဂ်ပြီး တဂ်တဲ့သူက လာမဖတ်ဖြစ်ရင် အားနာစရာကြီး..
ညီမလေးရင်ထဲက သီချင်းလေးတွေကို ခံစားတတ်သော နှလုံးသားတစုံဖြင့် လေးနက်စွာ နားထောင်သွားခဲ့ပါတယ်..
နှလုံးသားအဟောင်းနဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ့..ဘယ်တော့မှအသစ်မရှာခြင်းဆိုတာကလည်း အမြဲတမ်းသစ်နေတဲ့ အရာပဲလေ ညီမလေးရေ..
အသစ် အသစ်ဆိုတာတွေက အဟောင်း အဟောင်းတွေ ဖြစ်သွားရစမြဲပဲမဟုတ်လား...
အမှတ်တရပို့စ်ကို သတိတရရေးပေးတဲ့အတွက် ညီမလေးနှင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ခုတလော အလုပ်တွေက များနေလို့ မရောက်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတာ..